परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १०१ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु | अंश १०१
परमेश्‍वरको अख्तियार केको प्रतीक हो? के यो परमेश्‍वर स्वयम्‌को पहिचानको प्रतीक हो? के यो परमेश्‍वरको स्वयम्‌को शक्तिको प्रतीक हो? के यो परमेश्‍वर स्वयम्‌को अद्वितीय हैसियतको प्रतीक हो? सबै थोकमध्येमा, केमा तैँले परमेश्‍वरको अख्‍तियार देखेको छस्? तैँले यो कसरी देखिस्? मानिसले अनुभव गर्ने चार ऋतुहरूको हकमा कुरा गर्दा, के कसैले वसन्त, ग्रीष्म, शरद, र शिशिरको बीचमा हुने परिवर्तनको नियमलाई परिवर्तन गर्न सक्छ? वसन्तमा, रूखका मुनाहरू उम्रन्छन् र फक्रन्छन्; ग्रीष्ममा ती पातहरूले भरिन्छन्; शरदमा तिनीहरूले फल फलाउँछन्, र शिशिरमा पातहरू झर्छन्। के कसैले यो नियमलाई परिवर्तन गर्न सक्छ? के यसले परमेश्‍वरको अख्तियारको एउटा पक्षलाई झल्‍काउँछ? परमेश्‍वरले “उज्यालो होस्,” भनी भन्‍नुभयो र उज्यालो भयो। के यो उज्यालो अझै अस्तित्वमा छ? के कारणले यो अझै अस्तित्वमा छ? निश्‍चय नै, परमेश्‍वरका वचनहरूको कारणले, र परमेश्‍वरको अख्‍तियारको कारणले यो अस्तित्वमा छ। के परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएको हावा अझै अस्तित्वमा छ? के मानिसले फेर्ने सास परमेश्‍वरबाट आउँछ? के परमेश्‍वरबाट आउने कुराहरूलाई कसैले खोस्‍न सक्छ? के कसैले तिनीहरूका सार र कार्यगत गुणलाई परिवर्तन गर्न सक्छ? के परमेश्‍वरले तय गर्नुभएको रात र दिनलाई, र परमेश्‍वरले व्यवस्थित गर्नुभएको दिन र रातको नियमलाई कसैले उल्ट्याउन सक्छ? के शैतानले त्यस्तो कुरा गर्न सक्छ? यदि तँ राती सुत्दैनस्, र रातलाई दिनको रूपमा लिन्छस् भने पनि, त्यो अझै पनि रातको समय नै हुन्छ; तैँले आफ्‍नो दैनिकीलाई परिवर्तन गर्न सक्छस्, तर रात र दिन परिवर्तन हुने नियमलाई तैँले परिवर्तन गर्न सक्दैनस्—यस तथ्यलाई कुनै पनि व्यक्तिले परिवर्तन गर्न सक्दैन, होइन र? के गोरु जोतेजस्तो सिंहलाई खेत जोत्‍न लगाउन सक्‍ने कोही छ? के हात्तीलाई गधामा परिवर्तन गर्न सक्‍ने कोही छ? के कुखुरोलाई चीलजस्तो आकाशमा वेग हान्‍ने बनाउन सक्‍ने कोही छ? के ब्‍वाँसोलाई भेडाजस्तो घाँस खाने बनाउन सक्‍ने कोही छ? (छैन।) के पानीको माछालाई सुक्‍खा जमिनमा जिउने बनाउन सक्‍ने कोही छ? मानिसहरूले त्यसो गर्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन्? किनभने परमेश्‍वरले माछालाई पानीमा बस्‍ने आज्ञा दिनुभयो, त्यसकारण तिनीहरू पानीमा बस्छन्। जमिनमा तिनीहरू बाँच्‍नेछैनन्, मर्नेछन्; तिनीहरूले परमेश्‍वरको आज्ञाका सीमितताहरूलाई भङ्ग गर्न सक्दैनन्। सबै थोकसँग तिनीहरूको अस्तित्वसम्‍बन्धी नियम र सीमितता हुन्छ, र तिनीहरू प्रत्येकसँग तिनीहरूको आ-आफ्‍नै प्राकृतिक गुणहरू हुन्छन्। यी सृष्टिकर्ताले निर्धारित गर्नुभएको हो, र यसलाई कुनै पनि मानिसले परिवर्तन गर्न र नाघ्‍न सक्दैन। उदाहरणको लागि, सिंह सधैँ नै मानिसको समुदायबाट टाढा, जङ्गलमा बस्‍नेछ, र जसरी गोरु मानिससँग जिउँछ र मानिसको लागि काम गर्छ त्यसरी त्यो कहिल्यै पनि आज्ञाधीन र बफादार हुन सक्दैन। हात्ती र गधा दुवै जनावर हुन् र दुवैका चार खुट्टा हुन्छन्, र तिनीहरू हावामा सास फेर्ने प्राणीहरू हुन्, तैपनि तिनीहरू फरक-फरक प्रजाति हुन्, किनभने तिनीहरूलाई परमेश्‍वरले नै फरक-फरक प्रकारमा विभाजित गर्नुभएको थियो, तिनीहरू प्रत्येकसँग तिनीहरूका आ-आफ्‍नै प्राकृतिक गुणहरू हुन्छन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई कहिल्यै पनि एक-आपसमा साट्न सकिनेछैन। कुखुरोसँग चीलको जस्तै दुई खुट्टा र पखेटाहरू हुने भए तापनि, त्यो कहिल्यै पनि हावामा उड्न सक्‍नेछैन; बढीमा त्यो रूखसम्‍म उड्न सक्छ—यसलाई त्यसको प्राकृतिक गुणले नै निर्धारित गरेको हुन्छ। अवश्य नै, यी सबै परमेश्‍वरको अख्‍तियारका आदेशहरूका कारणले भएका हुन्।